helloilam: चिया पर्यटन
इलाम र चिया पर्यायवाची झैं बनेका छन् । जोकसैले पनि इलाम भन्नासाथ चिया र चिया भन्नासाथ इलामलाई संझन्छ । 'चियाले जसरी इलाम चिनाएको छ, त्यसरी नै इलामले चिया चिनाएको छ,' महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामका पर्ूव प्रमुख युद्धप्रसाद वैद्य भन्छन् ।
नेपालमा इलामबाटै एक सय ४५ वर्षघि चिया खेती सुरु भएको हो । तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले चीनबाट पाएको उपहार 'चिया' वि.सं. १९२० सालमा इलाम सदरमुकाममा रोपेका थिए । कलमी गरिएको बुटाहरुको आकर्ष बगान, यसको आवश्यकता तथा यसबाट हुने आम्दानीका कारण चिया खेती फैलिएर झापा, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम हुँदै अहिले नेपालको १८ वटा जिल्लामा पुगेको छ ।
इलाममा चाहिं अहिले झण्डै पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुन्छ । चिया खेतीबाट नगद आर्जन पनि हुने भएकोले इलामका नाङ्गो डाँडापाखाहरु चियाको बुटाहरुले ढाकिने क्रम बढ्दो छ जसले प्राकृतिक सौर्न्दर्यता बढाइरहेको छ ।
इलाम आउने आन्तरिक तथा वाहृय पर्यटकहरुको मूल ध्येय पहाडको चिसो हावा, चिया बगानको हरियाली र चियापत्ती टिपिरहेका महिलाहरुको दिनचर्याको अवलोकन गर्नु र रम्दै फोटो खिच्नु हो । नागबेली परेको मेची राजमार्ग आसपासको कन्याम बगान र सदरमुकाम छेवैको इलाम बगान चियाका लागि मुख्य आकर्ष ठाउँ हुन् । हुस्सुसँग लुकामारी खेलिरहने कन्यामको वातावरणले त जोकोहीलाई पनि रोमाञ्चक बनाउँछ । 'नेपालभित्र पनि यति राम्रो ठाउँ छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ,' पहिलोपटक कन्याम टेकेपछि झुम्का, सुनसरीका धीरेन्द्र चौधरीले दङ्ग पर्दै भने ।
चियालाई केन्द्रित गरेर रचिएका 'इलामे शहर, चियाबारी राम्रो', 'चियाबारीमा हो', 'उडीउडी डुल्छ मन चियाबारीमा', 'दर्ुइ पाते सुइरो कोपिलामाझ' जस्ता गीतहरुसमेत चर्चित बनेका छन् ।
मेची राजमार्गमा झापा छोडेर उकालिने बित्तिकै सुरु हुने कन्यामको हावापानी बाह्रैमास चिसो हुने भएकोले तराइबासीका लागि गर्मी छल्ने ठाउँ पनि भएको छ । हिउँद याममा त कन्याममा घुम्न आउने र बनभोज खानेहरुको भीड नै लाग्छ । चिया बगान चलचित्र तथा गीतहरु सुटिङ गर्ने थलो पनि बनेको छ ।
सदरमुकामस्थित बगानको कारखाना नेपालकै सवभन्दा पुरानो हो । वि.सं. १९३५ सालमा स्थापना भएको चिया कारखाना नेपालकै पुरानो भनिएको विराटनगरको जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीभन्दा पनि चार दशक पुरानो हो । पुरानो चिया कारखाना २०५७ सालदेखि बन्द भएपछि रित्तो भवनमात्र छ । जिल्लामा अहिले १३ वटा कारखाना सञ्चालित छन् । ती सबैले अर्थोडक्स चिया तयार गर्छन् । अर्थोडक्स चिया चाहिं मुलुकबाहिर खपत हुन्छ,
Posted by Roshan Sanba at 10:01 PM
soi dhole soi......
limbu's chyabrung dance
soi soi la.........
rai's chandi dance
sunuwar's cultural dance
magar's cultural dance
Gurung's cultural dance
hamro vasa, hamro ves
lapcha people of ilam
माइपोखरी रामसारमा सूचिकृत
झुल्के घाम हर्ेर्ने बेला
धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्दैछ माङसेबुङ